Ukubhula okulungileyo ngefowuni
A ngaziwa U kuhlenga
Ngamnye wethu ufuna ukwazi oko kuza kwenzeka kuye kwikamva, yintoni eyenzekayo kuye nokuba yintoni eyoyikisayo. Kodwa, ngelishwa, asikwazi ukujonga kwikamva lethu. Nangona bekuye kwandula kubekho indlela abazalwana bethu abakhulu-abakhulu-basebenzise ngayo. Oku, kunjalo, kuxoxwa ngenhlanhla. Kwaye ukuba ngaphambili ungathetha kuphela iindwendwe kwiimephu, ngoku ngoku kukho iintlobo ezininzi zeentlupheko. Ngokomzekelo, sonke sinokubhula okwenene ngefowuni.
Yiyiphi ukuvumelanisa ngefowuni? Enyanisweni, le ndlela yokubhula ibe yinto eyaziwayo kakhulu kwihlabathi lanamhlanje. Emva kwakho konke, ukuze uxelele inzuzo, akufuneki ukuba usasaze amakhadi. Ngokuqhelekileyo ukuthumela nje igama elithile ukufumanisa oko kukulindele kwixesha elizayo.
Abachazi benkohlakalo abanamalungelo bahluke kakhulu. Ngokuqhelekileyo, ngokuqinisekileyo, amantombazana bakhetha ukuxoxwa ngothando. Ukuze ufumane ukuba umntu ufanelekile yini, kufuneka nje uthumele igama lakhe kwifowuni. Ngomzuzu, uya kuba nokukwazi ngokuchanekileyo indlela ohambelana ngayo nale nsizwa kunye nokuba ufanele uqale ulwalamano naye.
Ukuxoxwa kwansuku zonke
Ewe, unokuqiqa kwifowuni kungekhona nje kuphela uthando. Kwakhona, kwimpilo yemihla ngemihla, okubizwa ngokuba yi-"day fortune telling" inokuba luncedo kakhulu. Ezi zivumo ziya kukunceda uphile ngosuku olufanelekileyo, ungagxininisi kwiintsilelo uze wenze ngokukhawuleza izigqibo ezifanelekileyo. Ukubhula okunjalo kunokungafani kakhulu. Umzekelo, unokwenza ikhadi elithile, thumela igama lakho, uphawu lwe-zodiac, ukuqagela inombolo kunye njalo njalo. Ngokubanzi, i-fortune-telling means ithetha ezininzi iindlela ezahlukeneyo. Kufuneka ukhethe okuthandayo kwaye ukhangele indlela ovakalelwa ngayo.
Isimo sengqondo esifanelekileyo
Abaninzi babhekisela kule ntsimi engabonakaliyo, kungenxa yoko abaninzi abayithandi iziphumo zobungqina obunjalo. Enyanisweni, kufuneka kukhunjulwe ukuba, ngokuqinisekileyo, izivumo ezintle azifani nakweyiphi na indlela. Ngoko ke, ngaphambi kokuba uqale ukubhula, gxininisa kumbuzo wakho ngokungangoko kunokwenzeka. Kwimeko xa uqikelele kumntu othile-zicinge ngokwakho, khumbula intetho yakhe, imbeko, iphunga. Kule meko kuphela, isigidimi sakho samandla siya kuthunyelwa kunye negama ocinga ngalo, kwaye ke ukuxoxwa kwenhlanhla kuya kuzaliseka. Ukuba uqikelele kwimeko, yicinge ngezo zonke iinguqu, kodwa ungaqali ukubonisa isisombululo. Kulula nje kule meko kungase kwenzeke ukuba wena uza kuza nempendulo, ufake amandla kuyo kwaye umphumo wokuvumisa uhambelana nayo. Ewe, oku kuya kukuncedisa, kodwa ufuna impendulo enyanisekileyo, ukwanelisekanga kwiminqweno yakho okanye ukuzithemba. Emva kokuba ugxininise kumbuzo wakho, ingxaki okanye umntu - thumela uphawu oluyimfuneko ukuqikelela nokulindela impendulo.
Ukuqagela kwifowuni kulula kwaye kulula. Unako ukufumana impendulo malunga nokuba nayiphi na imibuzo yakho, emsebenzini, ekhaya okanye kwisitalato. Ukongeza, akudingeki udibanise nabanqabile kwaye uchithe ixesha lakho ukuya kwiiseshoni. Ezi zivumo zenzelwe ukwenza ubomi bakho bukhululeke ngokusemandleni akho. Ukongezelela, abaninzi banokuqinisekisa ukuba inkolelo-mboleko yefowuni iyinyaniso kwaye iyakwazi ukuphendula phantse yonke imibuzo yakho.
Okukuphela kokunciphisa i-fortune-telling-almost always they are free. Kodwa, njengokuba uyayazi, ukukhawuleza ukwenza imisebenzi ethile, kufuneka uhlawule rhoqo. Ngoko ke, ukuba ufuna ukwazi ikusasa lakho, njengoko ilizwi lihamba "ngaphandle kokuphuma kwiofisi yetikiti," ke, qi ni sekisa ukusebenzisa i-fortune telling by phone. Ngomzuzu uzakufumana impendulo kwaye uya kuqonda indlela yokwenza ngokuchanekileyo kuloo meko.
Sinquma ngesandla singaphi abantwana kunye nemitshato eya kuba yile, iklasi yeklasi yesigqabi
I-Krismesi ixela i-future fortune
I-Christmas spell - ityala ngetayileni indoda esatshatileyo
I-fortune ethembekileyo yokuxoxela inzuzo yeKrismesi
I-Krismesi: Ukuqaphela iKrismesi kumaqanda
Njengoko iinguqulelo ezichaziweyo zibonwa kwintyatyambo yephupha ebhodweni
Iimveliso ezitshisa iikhalori
Ingakanani ixesha kunye nendlela yokupheka i-semolina ipharari ngobisi namanzi: zokupheka ngamanyathelo kunye nezithombe kunye namavidiyo
I-spaghetti ngaphandle kwe-sauce, nokuba kunjalo, loo msizi ngaphandle kwenyama
Ukufundisa abantwana abhaliweyo ngeendlela zeZaitsev
Ukwenza ngokugqibeleleyo ubuso obuseleyo kuNyaka omtsha 2017: Iingcebiso ze-TOP-4
Imisebenzi yeMatrimonial kwicandelo lamadoda
Isondlo esifanelekileyo kunye nokuqhawulwa
Izinwele ezinamafutha: iingcebiso zokunakekelwa kunye zokupheka kweemaski zasekhaya